यस्तो छ तपाईको शुक्रबारको भाग्य! असोज २९ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् – Paluwa Khabar
अषोज २८, २०७८ बिहिबार 52
मीन – कर्मप्रति निष्ठा राखी अघि अघि बढ्दा अन्त्यमा सफलता नै आर्जन हुनसक्ने दिन छ । परोपकार र धार्मिक क्षेत्रका क्रियाकलापमा ध्यानकेन्द्रित हुनसक्छ । सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ । दिन छिप्पिंदै जाँदा भाग्यबल बढ्दै जाने समय छ । साँझमा परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ । आँटेका ताकेका काममा सफलता मिल्दै जानेछ ।
Prevआधा घण्टा अघि यस्तो तस्बिर राखेकी डा. दीपाको भयो दु’खद् नि’धन (भिडियो हेर्नुस्)
Nextअब राजा फर्कने सपना पनि नदेखे हुन्छ सोच्ने मात्र हो:गोपालमान श्रेष्ठ
दैलेखमा बस दुर्घटना एककाे मृ~त्यु १४ घाईते
बाबुराम भट्टराई एमाले प्रवेश, भर्खरै प्राप्त भयो यस्तो जानकारी ,हेर्नुहोस्